Manual mgbanye Gas ọwa Factory - China Manual mgbanye Gas ọwa Manufacturers, ọnọ
KLL-Piezo Ing Gas Gas-8808D
KLL-Akwụkwọ ntuziaka Gas Gas-7001D
KLL-Ntuziaka Mgbanye Ọkụ Gas-5002D
KLL-Ntuziaka Mgbanye Ọkụ Gas-7003D
KLL agba agba edo edo edo edo, ahụ ọla, mgbanaka ntuziaka, a na-ewepụta ya maka iji eme ihe n'èzí, biko gbaa mbọ hụ na ịghara iji ya n'ime ịkpa ike, ụgbọ ala, ortens, ebe enwere nsogbu nke ọnwụ site na iku ume n'ihi tocarbon dioxide posisoning ma ọ bụ ụkọ oxygen. . Ọbụna mgbe ị na-eji ya n'èzí anyị dị warara, gbaa mbọ hụ na e nwere ikuku ikuku zuru oke, ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ n'etiti etiti ruo ogo 1300.
KLL-Akwụkwọ ntuziaka Gas Gas-7005D
KLL agba agba agba agba agba, tube tube, aluminium ekwe pipe, ntuziaka mgbanye, fechaa, kemeghi ire ọkụ echekwa iji, okpomọkụ gbawara kpamkpam ebibi osisi cell Ọdịdị, tumadi iji maka ekwe ọkpọkọ na-enwe mmetụta, n'èzí, deforsting ọkpọkọ na ndị ọzọ Plumbing ọrụ, akara PVC na njikọta akpọrọ, na-agbanye ọkụ BBQ na ọkụ wdg. Jiri mgbatị butli gas na-enweta dị ka isi iyi mmanụ, isi ọkụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ruo ogo 1300.
KLL-Akwụkwọ ntuziaka Gas Gas-7006D
Block agba mgbanwe knob, nnukwu SS tube na ire ọkụ ka gas katrij, ntuziaka mgbanye, pụrụ iche cyliner kpochidoro iji gbochie leakage, ergonomic ahụ imewe, environmentally friendly, ọ dịghị ize ndụ Chemicals, cordless; fechaa, kemeghi oku oku echekwa iji, ikpo gbawara kpamkpam ebibi osisi cell Ọdịdị, tumadi iji maka ekwe ọkpọkọ na-enwe mmetụta, deforsting ọkpọkọ na ndị ọzọ na Plumbing ọrụ, akara PVC na tupu soldered njikọ, amụnye BBQ si na ọkụ wdg iji easliy enweta butane gas cylinder dị ka mmanụ isi iyi, center oku na-arụ ọrụ okpomọkụ ruo 1300 degrees.
KLL-Akwụkwọ ntuziaka Gas Gas-7008D
Black agba mgbanwe knob, nnukwu SS tube, ntuziaka mgbanye, pụrụ iche cyliner kpochidoro iji gbochie leakage, ergonomic ahụ imewe, environmentally friendly, ọ dịghị ize ndụ Chemicals, cordless; fechaa, kemeghi oku oku echekwa iji, ikpo gbawara kpamkpam ebibi osisi cell Ọdịdị, tumadi iji maka ekwe ọkpọkọ na-enwe mmetụta, deforsting ọkpọkọ na ndị ọzọ na Plumbing ọrụ, akara PVC na tupu soldered njikọ, amụnye BBQ si na ọkụ wdg iji easliy enweta butane gas cylinder dị ka mmanụ isi iyi, center oku na-arụ ọrụ okpomọkụ ruo 1300 degrees.
KLL-Ntuziaka Mgbanye Ọkụ Gas-7009D
Black agba mgbanwe knob, nnukwu SS tube na ire ọkụ ka gas katrij, ntuziaka mgbanye, pụrụ iche cyliner kpochidoro iji gbochie leakage, ergonomic ahụ imewe, environmentally friendly, ọ dịghị ize ndụ Chemicals, cordless; fechaa, kemeghi oku oku echekwa iji, ikpo gbawara kpamkpam ebibi osisi cell Ọdịdị, tumadi iji maka ekwe ọkpọkọ na-enwe mmetụta, deforsting ọkpọkọ na ndị ọzọ na Plumbing ọrụ, akara PVC na tupu soldered njikọ, amụnye BBQ si na ọkụ wdg iji easliy enweta butane gas cylinder dị ka mmanụ isi iyi, center oku na-arụ ọrụ okpomọkụ ruo 1300 degrees.
KLL-Akwụkwọ ntuziaka Gas Gas-7011D
KLL agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba iji kpo oku ude na kpo oku. Ga-etinye na microwelding inbolving ọla kọpa- ịgbado ọkụ, silver- ịgbado ọkụ, tin-ịgbado ọkụ na ịchọ mma nhazi. Fusing, ịgbado ọkụ, sureface ọgwụgwọ na obodo kpo oku na omumuihe, ụgbọala na ụlọ nyocha. wdg were were easliy nweta butane gas cylinder dị ka mmanụ ọkụ isi iyi, center oku na-arụ ọrụ okpomọkụ upto 1300 degrees.
KLL-Ntuziaka Mgbanye Ọkụ Gas-7015D
Red agba mgbanwe knob, ọla tube, ntuziaka mgbanye, pụrụ iche cyliner kpochidoro iji gbochie leakage, ergonomic ahụ imewe, environmentally friendly, ọ dịghị ize ndụ Chemicals, cordless; fechaa, kemeghi ire ọkụ echekwa iji, ikpo gbawara kpamkpam ebibi osisi cell Ọdịdị, tumadi iji maka ịgbado ọkụ ntụ oyi anwụrụ, deforsting ọkpọkọ na ndị ọzọ na Plumbing ọrụ, akara PVC na tupu soldered njikọ, amụnye BBQ si na ọkụ wdg. jiri easliy inweta butane gas cylinder dị ka mmanụ isi iyi, center oku na-arụ ọrụ okpomọkụ ruo 1300 degrees.
KLL-Ntuziaka Mgbanye Ọkụ Gas-7016D
KLL odo agba kemeghi akpu, ọla tube, SS ekwe tube, ntuziaka mgbanye, pụrụ iche cyliner kpochidoro iji gbochie leakage, Jiri maka okpomọkụ-shrinkable aka uwe na ha njikọ. Ga-etinye na microwelding inbolving ọla kọpa-ịgbado ọkụ, ọlaọcha-ịgbado ọkụ, tin-ịgbado ọkụ na ịchọ mma nhazi. Fusing, ịgbado ọkụ, sureface ọgwụgwọ na obodo kpo oku na omumuihe, ụgbọala na ụlọ nyocha. wdg. jiri easliy nweta butane gas cylinder dị ka mmanụ ọkụ isi, center oku na-arụ ọrụ okpomọkụ upto 1300 degrees.
KLL-Ntuziaka Mgbanye Ọkụ Gas-7013D
Brass kemeghi iku, ọla ahu, ntuziaka mgbanye, fechaa, mgbanwe ire ọkụ echekwa iji, okpomọkụ gbawara kpamkpam ebibi osisi cell Ọdịdị, tumadi iji maka ekwe ọkpọkọ na-enwe mmetụta, n'èzí ojiji, deforsting ọkpọkọ na ndị ọzọ na Plumbing ọrụ, akara PVC na tupu soldered njikọ, na-enwu ọkụ BBQ na ọkụ wdg, jiri ụyọkọ gas na-enweta butli gas dị ka isi iyi mmanụ, ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ n'etiti etiti ruo ogo 1300.
KLL-Akwụkwọ ntuziaka Gas Gas-7104D
KLL agba agba agba agba agba, eriri tube na cyclone n'ime, na mkpanaka na ntụgharị, mgbanye akwụkwọ ntuziaka, mkpọchi cyliner pụrụ iche iji gbochie ụcha mmiri, Jiri maka aka uwe na-agbanye ọkụ na njikọta ha. Ga-etinye na microwelding inbolving ọla kọpa- ịgbado ọkụ, silver- ịgbado ọkụ, tin-ịgbado ọkụ na ịchọ mma nhazi. Fusing, ịgbado ọkụ, sureface ọgwụgwọ na obodo kpo oku na omumuihe, ụgbọala na ụlọ nyocha. wdg were were easliy nweta butane gas cylinder dị ka mmanụ ọkụ isi iyi, center oku na-arụ ọrụ okpomọkụ upto 1300 degrees.
KLL-Ntuziaka Mgbanye Ọkụ Gas-7013C
ọla ọla na ss kemeghi aka, ntuziaka mgbanye, fechaa, Kemeghi ire ọkụ akara na onwe mgbanye. Kpụrụ ergonomic maka ijide aka na aka. Enwere ike idozi ya na butane tank, nke enwere ike dochie ya, iji okirikiri eme ihe na gburugburu ebe obibi.
Adabara ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ezinụlọ, picnic, hiking, maa ụlọikwuu na ndị ọzọ n'èzí-eme.
KLL-Ntuziaka Mgbanye Ọkụ Gas-7023C
ọla ọla na ss kemeghi aka, ntuziaka mgbanye, fechaa, Kemeghi ire ọkụ akara na onwe mgbanye. Kpụrụ ergonomic maka ijigide aka na aka. Enwere ike idozi ya na butane tank, nke enwere ike dochie ya, iji okirikiri eme ihe na gburugburu ebe obibi.